Wasiirka Dalxiiska Jamaica oo tacsi u diray qoyska Melody Haughton-Adams
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Wasiirka Dalxiiska Jamaica oo tacsi u diray qoyska Melody Haughton-Adams
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dadka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Hon. Edmund Bartlett waxa uu tacsi tiiraanyo leh u diray qaraabadii iyo qaraabadii ay ka geeriyootay Melody Haughton-Adams, oo ah Gudoomiyaha Ururka Ganacsatada Farsamada Gacanta ee Jasiiradda oo dhan, oo maanta hore u geeriyootay xanuun ku soo booday.
Haughton wuxuu ahaa Madaxweynaha Ururka Ganacsatada Farsamada Gacanta ee Jasiiradda oo dhan in ka badan labaatan sano.
Waxay u shaqeysay sidii Madaxweynaha Suuqa Farsamada ee Harbor Street ee Montego Bay muddo tobanaan sano ah.
Melody waxa ay aad u xiisaynaysay horumarinta warshadaha farsamada gacanta oo waxa ay sannado badan ka ahayd mid muhiim ah warshadaha dalxiiska.
"Melody waxa ay sannado badan ka mid ahayd warshadaha dalxiiska, waxayna had iyo jeer aad u jeclaa horumarinta warshadaha farsamada gacanta. Waxay ahayd bini'aadam heersare ah oo runtii ay tebi doonaan dhammaan kuwa mudnaanta u leh inay ogaadaan iyada. Anigoo ku hadlaya magaca Wasaaradda Dalxiiska iyo dhammaan hay'adaha dowliga ah, sidaas darteed, waxaan tacsi u dirayaa qoyskeeda iyo asxaabteeda inta lagu jiro waqtigan adag," ayay tiri wasiir Bartlett.
Haughton waxa uu madax u ahaa Ururka Ganacsatada Farsamada Gacanta ee Jasiiradda oo dhan in ka badan labaatan sano waxana uu u soo shaqeeyay Madaxwaynihii Suuqa Farsamada ee Harbor Street ee Montego Bay muddo tobanaan sano ah.
"Melody xiisaha ay u qabto warshadaha farsamada gacanta, iyo dalxiiska fidinta, run ahaantii waa mid aan la barbar dhigi karin oo warshadeena la'aanteed sidii la mid ah ma noqon doonto. Nafteedu ha nabad qabo Aabbahayaga jannada ku jira,” ayuu yidhi wasiir Bartlett.